Isaga Oo Indho La’ Ayuu Haddana Jaamacad Kaalinta 1aad U Galay | Gacanlibaaxnews
Isaga Oo Indho La’ Ayuu Haddana Jaamacad Kaalinta 1aad U Galay
Waxa uu ka mid ahaa araydii dhawaan ka qalinjebisay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. Waxa uu ahaa ardaygii jaamacadda ugu sarreeyey. Waa Cabdifataax Ibraahin Habbane oo aragga naafo ka ah, is la markaa na indhabeelay isaga oo dhigta fasalka koobaad ee ee dugsiga sare. Waa nin qur’aanka Ilaahay korka ka haya oo xafidsan.
Halkan ka daawada dukumenteri si fiican uga hadlaya nolosha Cabdifataax iyo maraaxilkii uu soo maray intii uu aragga la’aa.